Askarta Itoobiya Oo Lagu Weeraray Gobalka Galgaduud. – Calamada.com
Askarta Itoobiya Oo Lagu Weeraray Gobalka Galgaduud.
Wararka laga helayo gobalka Galgaduud ee bartamaha dalka Soomaaliya waxey sheegayaan in weerar culus lagu qaaday Kolanyo ka tirsan ciidamada Kufaarta Xabashida Itoobiya oo maalmo ka hor kasoo baxay degmada Dhuusamareeb ee gobalka Galgaduud.
Kolanyada Itoobiyaanka ah ee weerarka lagu qaaday ayaa ku sugan Tuulada Wamooley oo hoostagta deegaanka Ceel-lahelay oo ah deegaan dhaca wadada isku xirta degmooyinka Ceelbuur iyo Dhuusamareeb oo ka wada tirsan gobalka Galgaduud.
Dagaalkan waxaa la isku adeegsaday hubka culus iyo midka fudud kaasi oo dhawaaqiisa laga maqlay qeybo ka mid ah gobalka Galgaduud’si rasmi ah looma xaqiijin karo khasaaraha ciidamada Itoobiya lagu gaarsiiyay dagaalka maadaama uu dhacay xilli habeen ah tuuladana aysan ku sugneen wax dad shacab ah.
Kolanyadan lagu weeraray Wamooley ayaa ah Kolanyo Itoobiyaan ah oo maalmo ka hor kasoo baxay degmada Dhuusamareeb kuwaasi oo kusii jeeda degmada Ceelbuur oo muddo saddex sano ah duulaan ku joogaan askarta Xabashida Itoobiya.
Wararka qaar ayaa sheegaya in kolanyadaan ay doonayaan iney gabi ahaan soo raraan ciidamada Itoobiya ee ku sugan degmada Ceelbuur waxaana suura gal ah in gabi ahaan Xabashida Itoobiya isaga baxaan degmada Ceelbuur oo ah magaalo istiraatiiji ah oo ka tirsan gobalka Galgaduud.
Previous: Weerar Xoog Ku Gal Ah Oo Ka Dhacay Dalka Yemen.
Next: Halkan Ka Dhageyso Warka Duhurnimo 29-06-1438 Hijri.
1 thought on “Askarta Itoobiya Oo Lagu Weeraray Gobalka Galgaduud.”
…… Ninkii dhoof ku yimidaa geeridu dhibeeysaaa….